Waa in aadan quudiyo trolls ah | Apg29
Trolls rabto si looga hortago in dad ka badbaadiyey sidaas sidaas daraaddeed marna waa inaad iyaga ku quudin.
Sidaas waxaa jira qorshe ka dambeeya dhaqankooda. Sidaas daraaddeed waxaan daweeyo marnaba comments dadka aan iska shakiyo waa sixir. Oo waxaan iyaga siin si aan cunto.
Waa maxay "Sixir"?
troll A internetka waa qof doonayo kaliya inuu baabbi'iyo oo wada hadlaan waxyaabaha ka jabay ee comments ka. Waxaad ma ka jawaabi karaan dadka qaba ujeedooyin sida.
Markii aan bilaabay in blog ah apg29 si isku dayeen qaar ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah ka jawaabaan trolls kuwan, laakiin muddo ka dib, ma ay joogaan. Tani waa ujeedada goblin, si ay u qaataan waqti dadka iyo iyaga daalaan soo baxay si ay u soo afjaraan ilaa Quusan.
Trolls waa tuug waqti, ay doonayaan in ay u cabsi geliyaan oo na aammusiyaan. Sidaas waxaa jira qorshe ka dambeeya dhaqankooda. Sidaas daraaddeed waxaan daweeyo marnaba comments dadka aan iska shakiyo waa sixir. Oo waxaan iyaga siin si aan cunto.
Tani waa ujeedada goblin, si ay u qaataan waqti dadka iyo iyaga daalaan soo baxay si ay u soo afjaraan ilaa Quusan.
ma ku doodi karaa
Waxaa sida caadiga ah ma ku doodi qof leh dabeecad troll maxaa yeelay, ujeeddada ma aha si ay u abuuraan isku raacsan oo aan niyad qofka ku doodaya troll ka dhanka ah.
Sida caadiga ah waxaan deletar comments sida markaan iyaga ogaadaan, waayo, ma comments waa in lagu quudiyo dadka kale si ay wada hadal ku soo duuli doonaa. In xaalado gaar ah, aan ku sii daayay iyada oo comments sida ay u arkaan halka ay jilif wuxuu ku yidhi, iyo wadada dabcan, mar kasta ka baxsan.
tusaalooyin troll A
Mid ka mid ah tusaale ahaan sida uu yahay qaar ka mid comments in maqaalkan "Eeg, Waxaan samaynayaa wax cusub" in aan ku qoray for Sannadka Cusub. waa in aan qabto comment deletat ugu horeysay si toos ah, laakiin wuxuu doortay in aan sidaa sameeyo. Oo sidaas daraaddeed waxay la horumariyo sida ay tahay caado ah marka la siiyo shidaalka trolls.
Comments marin habaabiyay oo xadday mowduuca ee maqaalka si aan farriinta soo gaaray. Tani waa ujeedada goblin, inaan baabbi'iyo inta fariinta articles badan ee comments aan waxtar lahayn. Waxaan ha comments ka taagan si ay u muujiyaan sida waalan oo kale waxa ay noqon kartaa haddii aadan iska caabin ah "in biqilka" si toos ah. marna waa in aad ku quudiyaan trolls ah.
email A troll
Tusaale ahaan of comments on article aan waa sida cabsi badan sida ay mararka qaarkood waxay noqon karaan. Laakiin waxaan idin siin doonaa tusaale: waxaan ka helay email ah qof sheeganaya inuu yahay Christian a iyo sida iskibrin dhabasho daran ilaa uu aqoon weyn ee Kitaabka Quduuska ah. Sida saxda ah si qofka qoray:
"Waxaan warside ka helin apg29 in sano. Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil halkaasay Småland oo dhan Shayaadiinta Masiixiyiinta naxdo baabbi'in laga yaabaa."
Dabcan, ma aanan ka jawaabi mail sida uu yahay gebi ahaanba aan waxtar lahayn. Waxaan lahaa markaas uun helay xitaa ka badan e-mails iyo si aan laga badiyay waqti iyo dadaal qof oo aan haysan maanka ku hayeen inay bedesho.
Waxaan hore ee aan hubkaa aan qaadan lahaa ilaa aan waqti ay ku emails iyo comments sida bartay. Waa in aadan quudiyo trolls ah! Halkii, waa in aad ka tagto noocan oo kale ah wax si trolls ayaa ugu danbeyn noqdo gaajo si ay u ogaadaan waxa laga yaabaa in ay u baahan yihiin si ay u toobad keenaan in ay Ciise Masiix iyo badbaadi!
Ujeedada apg29 waa in ay bixiso injiilka Ciise Masiix in dadka si ay u awoodaan in ay soo dhoweeyaan isagii iyo badbaadi noqon doonaa. Wax this joojin kartaa. Trolls rabto si looga hortago in dad ka badbaadiyey sidaas sidaas daraaddeed marna waa inaad iyaga ku quudin.
Mana waxaan ka jawaabto wax emails ama comments ka dadka qaba arrimaha adag. Iyagu ma ay raadinayn jawaabo maxaa yeelay, waxay leeyihiin su'aalo daacad ah, laakiin waxa ay doonayaan oo kaliya inay wax weyddiiyaan. Ka jawaab emails sida ama comments, waxaad ka heli doontaa oo kaliya mid ka mid ah xaq u leh su'aalaha, ka dibna kale ka dibna kale ... Ha quudin trolls ah!
Ha quudin trolls ah
9 calaamooyinkan aad kulmay on troll internet ah